hoy ny hetsiky ny olom-pirenena, satria ireo no tompon’andraikitra tamin’ny halabato niseho teto, toa ny fifidianana filohampirenena sy ny depiote farany teo.Nambaran’i Rakotomalala Henri na Riri be avy amin’ny hetsiky ny olom-pirenena, fa tokony ovaina ny lalàna mifehy ny fifidianana mba isian’ny fifidianana madio, mangaraharaha ary eken’ny rehetra. Tokony ireo nandika lalàna sy nanao fahadisoana. Manao antso avo amin’ny olom-pirenena rehetra ny hetsiky ny olom-pirenena mba hitsangana hatramin’ny farany ary hanohitra ny halabato sy ny hosoka.Tsy hisy firenena vanona eto raha ohatra ka olona lany tamin’ny halabato no hitondra sy ny firenena sy ny faritra, hoy izy. Ny fihaonambe ataon’ity hetsika ho an’ny olom-pirenena ity etsy amin’ny Carlton dia fandraisana andraikitra sahady amin’ny fanatsarana sy ny endriky ny fifidianana atao eto amin’ny firenena. Tsy azo ekena intsony ny hiverenan’ny halatra eto, fa zava-doza ny nandrafetana ny fifidianana depiote farany teo iny. Mila mandray andraikitra ny olona rehetra ka ho sarotiny mba hampanjakana ny fahamarinana eto amin’ny firenena.